နိုင်ငံတကာသတင်း Archives - Page2of4- Achawlaymyar
သဲမုနျတိုငျးကွောငျ့ ဘဂေ့ငျြးတှငျ လိမ်မျောရောငျတိမျတိုကျဖုံးကာ ၃၄၁ ဦးပြောကျဆုံးနေ
March 16, 2021 by Achawlaymyar
သဲမုနျတိုငျးကွောငျ့ ဘဂေ့ငျြးတှငျ လိမ်မျောရောငျတိမျတိုကျဖုံးကာ ၃၄၁ ဦးပြောကျဆုံးနေ ဧရာဝတီ ဂိုဘီ သဲကန်တာရမှ စတငျသော သဲမုနျ့တိုငျးကွောငျ့ အဝါရောငျ ဖုံတိမျလိပျမြားက တရုတျမွို့တျော ဘဂေငျြးကို ပြောကျကှယျလုမတတျ ဖုံးလှမျးထားကွောငျး သတငျးမြားကဆိုသညျ။ လထေုညဈညမျးမှုအဆငျ့မှာ ကွောကျစရာကောငျးလောကျအောငျမွငျ့မားနပွေီး၊ နစေ့ဉျလုပျငနျးဆောငျတာမြား ရပျဆိုငျးကုနျကွောငျး သိရသညျ၊ မှနျဂိုလီးယားမှ လာသော ထိုမုနျတိုငျးအတှငျး လကျရှိအခြိနျအထိ သိရသလောကျ လူ ၃၄၁ ဦးပြောကျဆုံးနကွေောငျး တရုတျမီဒီယာအခြို့ဖျေါပွသညျ။ တရုတျပွညျတှငျ သဲမုနျတိုငျးတိုကျသညျမှာ အထူးအဆနျးမဟုတျသျောလညျး လှနျခဲ့သော ဆယျစုနှဈအတှငျး ဘဂေ့ငျြးသို့ ယခုလောကျပွငျးထနျသညျ့ သဲမုနျတိုငျး တိုကျခတျခွငျးမရှိဟု ဆိုကွသညျ။ ဖုံတိမျတိုကျမြားကွောငျ့ လယောဉျခရီးစဉျ ၄၀၀ကြျောကို ဖကျြသိမျးခဲ့ရပွီး၊ လာမညျ့ရကျအနညျးငယျအထိ ဘဂေငျြး၏ ရာသီဥတုမှာ သငျ့တျောသော ရာသီဥတုဖွဈမညျဟုတျဟု တရုတျမိုးလဝေသကဆိုသညျ။ တရုတျမှာတော့ အခု သဲမုနျတိုငျးဝငျနပွေီတဲ့ 👏👏👏 … Read more
ငါတို့နိုငျငံက မတညျမငွိမျဖွဈနတေဲ့ ပွဿနာမြားဟာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ကွောငျ့လညျး မဟုတျသလို NLD ကွောငျ့လညျး မဟုတျပါဘူး
March 13, 2021 by Achawlaymyar
မွနျမာပွညျရဲ့ဖွဈသညျ့ပွဿနာသညျပွညျတှငျးရေး မဟုတျပါနိုငျငံတကာရဲ့ မတညျမငွိမျမှုအရေးသာဖွဈသညျ နှဈပေါငျး ၅၀ ကြျောပွညျသူတှကေို ဖမျးဆီး ထောငျခခြဲ့တာတှကေ စဈတပျကလုပျခဲ့တာအခွခေံ ဥပဒသေညျလညျး သူတို့စိတျကွိုကျ နှဈပေါငျးမြားရေးဆှဲခဲ့သညျ ဥပဒေ သာဖွဈသညျ ငါတို့နိုငျငံက မတညျမငွိမျဖွဈနသေညျ ပွဿနာမြားသညျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ကွောငျ့လညျး မဟုတျပါဘူး NLD ကွောငျ့လညျး မဟုတျပါဘူး စဈကွောငျ့ဖွဈနတောယခုအခြိနျမှာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ မှားခဲ့တာတှကေိုပွောနရေမယျ့အခြိနျမဟုတျနိုငျငံတကာ နှငျ့ နိုငျငံခေါငျးဆောငျးမြား နှငျ့ အာဆီယံနိုငျငံမြား (တရုတျ ရုရှား အိန်ဒိယ)မငျးတို့ဆုံးဖွတျကွပါ ငါတို့နိုငျငံ တညျငွိမျမှုရဖို့ ဆိုတာငါတို့နိုငျငံ တဈခုတညျးအတှကျကွောငျ့မဟုတျဘူး အာစီယံနိုငျငံမြားရော ကမ်ဘာ့နိုငျငံမြားရဲ့လုံခွုံအရေးအတှကျရော အရေးကွီးလို့ ပွောနတော ကမ်ဘာနိုငျငံမြား… အာစီယံနိုငျငံမြားတရုတျ အိန်ဒိယအပါအဝငျအားလုံး မွနျမာပွညျသူမြားရဲ့ သဘောဆန်ဒနဲ့အတူရပျတညျပေးကွပါ မွနျမာပွညျသူမြား နှငျ့ မရပျတညျပေးပါကမတညျမွငိမျဖွဈနတောအားလုံးသညျ မငျးတို့ ရပျတညျခကျြ မငျးတို့ကွောငျ့သာဖွဈသညျ ငါတို့ပွညျသူ … Read more
မြန်မာပြည်အတွက် ထိခြင်းငါးပါးဘုရားရှိခိုးနည်းနဲ့ ဆုတောင်းပေးနေကြတဲ့ တောင်ကိုရီးယားဘုန်းတော်ကြီးများ ရုပ်သံ
March 12, 2021 by Achawlaymyar
မြန်မာပြည်အတွက် ထိခြင်းငါးပါးဘုရားရှိခိုးနည်းနဲ့ ဆုတောင်းပေးနေကြတဲ့ တောင်ကိုရီးယားဘုန်းတော်ကြီးများ ရုပ်သံ ဒီနေ့တောင်ကိုရီးယားက ဂျိုဂဲဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေပါ… မြန်မာပြည်အတွက် ထိခြင်းငါးပါးဘုရားရှိခိုးနည်းနဲ့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ မြန်မာသံရုံးရှေ့ကနေ UNရုံးရှေ့အထိကို သွားခဲ့ကြတာပါ မြန်မာပြည်အတွက် ဘုန်းတော်ကြီးတွေက ဆုတောင်းပေးကြတာပါတဲ့….. မျက်ရည်တောင်ဝဲမိတယ်..ဆရာတော်တို့ရဲ့ပို့သတဲ့ မေတ္တာတွေကြောင့် မြန်မာပြည်ကြီးအေးချမ်းပါစေ… ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တောင်ကိုရီးယား။ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြည့်ရ အားပေးရကျိုးနပ်တယ်။ Love you South Korea မြန်မာနိုင်ငံက ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းသတ်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာ တခြားနိုင်ငံတွေက မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က လုပ်ပေးနေတာတွေအတွက် ဝမ်းနည်းဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ် တောင်ကိုရီးယားလူမျိုးတွေကိုလဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဘုန်းတော်ကြီးများကိုရိုသေစွာဦးခိုက်ကန်တော့ပါတယ်..မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အပူမီးကိုမျှဝေခံစားပေးတဲ့အတွက်တောင်ကိုရီးယားပြည်သူများရဲ့ကျေးဇူးကြီးလှပါတယ် တောင်ကိုရီးယားက အရမ်းအားတက်သရောမြန်မာတွေအတွက်ဆုတောင်းပေး ကူညီပေးတာပဲနော် သတင်းတွေကအစဆက်တိုက်တင်ဆက်ပေးနေတာ Videoကြည့်ရန် unicode မွနျမာပွညျအတှကျ ထိခွငျးငါးပါးဘုရားရှိခိုးနညျးနဲ့ ဆုတောငျးပေးနကွေတဲ့ တောငျကိုရီးယားဘုနျးတျောကွီးမြား ရုပျသံ ဒီနတေ့ောငျကိုရီးယားက ဂြိုဂဲဗုဒ်ဓဘာသာဘုနျးတျောကွီးတှပေါ… မွနျမာပွညျအတှကျ ထိခွငျးငါးပါးဘုရားရှိခိုးနညျးနဲ့ တောငျကိုရီးယားရဲ့ မွနျမာသံရုံးရှကေ့နေ UNရုံးရှအေ့ထိကို … Read more
ကာခြုပျရဲ့သားသမီးနှဈဦးနဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှကေို အမရေိကနျဒဏျခတျအရေးယူ…
March 11, 2021 by Achawlaymyar
ကာချုပ်ရဲ့သားသမီးနှစ်ဦးနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို အမေရိကန်ဒဏ်ခတ်အရေးယူ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ သား အောင်ပြည့်စုံ၊ သမီး ခင်သီရိသက်မွန်နဲ့အတူ သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၆ ခုကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစိုးရက ဒီနေ့ ဒဏ်ခတ်အရေးယူလိုက်ပါတယ် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက မတ်လ ၁ဝ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ အရပ်သားအစိုးရကို ဖြုတ်ချပြီး အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ် အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်း သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်တွေအပေါ် တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ သားသမီးနှစ်ဦးအပေါ်ကို အရေးယူတာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားတာပါတယ် အောင်ပြည့်စုံနဲ့ ခင်သီရိသက်မွန်တို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတွေကတော့ A & M မဟာ ကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ Sky One ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလိမိတက် The Yangon Restaurant၊ … Read more
ဒေါကျတာဆာဆာရဲ့ အာတူးပီ ဖိတျချေါတဲ့စာ ကုလသမဂ်ဂ ရရှိကွောငျး ထုတျပွနျလိုကျပါပွီ နယူးယောကျ၊မတျလ ၉ ရကျ
March 9, 2021 by Achawlaymyar
ဒေါက်တာဆာဆာရဲ့ R2P ဖိတ်ခေါ်တဲ့စာ ကုလသမဂ္ဂ ရရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ (နိုင်ငံတကာသတင်း) မြန်မာအထူးသံကိုယ်စားလှယ်ဆီက ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့စာတစ်စောင်ကုလရရှိနယူးယောက်၊မတ်လ- ၉ ရက်ကုလသမဂ္ဂပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Stephane Dujarricက အဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ဟာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ကျူးလွန်မှုတွေအတွက် နိုင်ငံခြားက ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့စာတစ်စောင်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ စပွတ်နစ်သတင်းက မတ်လ ၉ ရက်ကဖော်ပြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဆာဆာက ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတာဝန် (R2P) ကိုကတိက၀တ်ပြုပြီးအရေးယူမှုပြုလုပ်ဖို့ ဂူတားရက်ဆီကို သို့စာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်၊ R2Pဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်စက်ယုတ်မာတဲ့ရာဇ၀တ်ကိုကာကွယ်ဖို့နောက်ဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်နိုင်ငံခြားကစစ်ရေးနည်းနဲ့ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်မှုကိုရွေးချယ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ “ကျနော်တို့စာကိုလက်ခံရရှိပါပြီအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့အထူးသံတမန်အပါအ၀င်ကုလသမဂ္ဂအရာရှိတွေဟာအဓိကသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်နေသလို ရွေးကောက်ခံပါလီမန်အမတ်တွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ရှိကြပါတယ်လို့Dujarric ကကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ သတင်း၊ဓာတ်ပုံ စပွတ်နစ် Unicode ဒေါကျတာဆာဆာရဲ့ R2P ဖိတျချေါတဲ့စာ ကုလသမဂ်ဂ ရရှိကွောငျး ထုတျပွနျလိုကျပါပွီ (နိုငျငံတကာသတငျး) မွနျမာအထူးသံကိုယျစားလှယျဆီက ကွားဝငျဆောငျရှကျပေးဖို့တောငျးဆိုထားတဲ့စာတဈစောငျကုလရရှိနယူးယောကျ၊မတျလ- ၉ ရကျကုလသမဂ်ဂပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ Stephane Dujarricက အဖှဲ့အတှငျးရေးမှူးခြုပျအနျတိုနီယိုဂူတာရကျဈဟာ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျတှရေဲ့ … Read more
CNN နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ ဒေါက်တာဆာဆာ
CNN နဲ. ဒေါက်တာဆာဆာ အင်တာဗျူးကောက်နှုတ်ချက် စီအန်အန်က မေးတာက လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ R2P` တောင်းရတဲ့ အကြောင်းကို အဓိကထားမေးတယ်။ မေးတဲ့သူက နံမည်ကြီး စစ်သတင်းထောက်ပါ။သိကြမှာပါ။ ဘယ်အချက်တွေကြောင့်ဆိုတာကို ဒေါက်တာဆာဆာ အကြမ်းဖျင်းရှင်းပြတယ် နောက် သတင်းထောက်က ကုလအထူးသတင်းထောက်ပြောတဲ့ ပစ်တဲ့ သေနတ်အမျိုးအစားတွေကို ပြန်ပြောပြရင်း ဗွီဒီယိုနဲ.ပါ ပစ်နေတာကို ပြနေတယ် ပြန်မေးတယ်။ ဒေါက်တာဆာဆာ က ဟုတ်မှန်ကြောင်းပြောပြီး ရှင်းပြတယ် နောက်ထပ် မြန်မာဆိုင်ရာ ကုလ အထူး ကိုယ်စားလှယ်ရဲ. ဗွီဒီယိုနဲ. မြန်မာပြည်သူတွေကို ပန်ကြားတာကို ပြန်ဖွင့်ပြတယ်။ ကုလကိုယ်စားလှယ်ပန်ကြားတာက မအလတို.က မြန်မာပြည်သူတွေကို အကြမ်းဖက်ပြီး ပြန်ခုခံတာမျိုးကို လုပ်စေချင်နေလို. မတရား အကြမ်းဖက်နေတာပါတဲ့။ ထောင်ချောက်ဆင်နေတာပါတဲ့။ မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ.အဲ့ထောင်ချောက်ထဲ မဝင်ကြဖို. တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့ အဲ့ဒါကို ပြပြီး ဒေါက်တာဆာဆာကို … Read more
မြန်မာနိုင်ငံက ဘာမြူဒါ (သို့) မြန်မာ့ပြန်လမ်းမဲ့ရေကန်(ပုံကိုနှိပ်ပြီးဖတ်)
February 27, 2021 February 27, 2021 by Achawlaymyar
မြန်မာနိုင်ငံက ဘာမြူဒါ (သို့) မြန်မာ့ပြန်လမ်းမဲ့ရေကန် ဘာမြူဒါ ဆိုရင် အဖြေရှာဖို့ခက်ခဲတဲ့ ထူးဆန်းမှုတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ နေရာလို့ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ အဓိကကတော့ အဲဒီနေရာကို ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ သင်္ဘောတွေလေယာဉ်တွေ အစအနမကျန်ပဲ ပျောက်ပျောက်သွားတတ်လို့ပါပဲ။ ဘာမြူဒါတြိဂံလိုပဲ နေရာတစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတယ်လို့ ဆိုရင် မသိသေးသူများ အံသြသွားနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ် ဘာမြူဒါနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ ပြန်လမ်းမဲ့ရေကန်လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ရေကန်တစ်ခုဟာ အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ် နာဂဒေသ မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ တည်ရှိနေပါတယ်။ ဒေသခံတွေကတော့ ဒီကန်ကို သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ နောင်ယန်းအင်း လို့ ခေါ်ပြီး အများဆုံးသိကြတဲ့နာမည်ကတော့ The Lake Of No Return (ပြန်လမ်းမဲ့ရေကန်) ဖြစ်ပါတယ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက လက်နက်ခဲယမ်း နဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေသယ်ဆောင်ဖို့ ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ လီဒိုလမ်းမကြီး (သို့) အိန္ဒိယ-တရုတ်-မြန်မာ လမ်း ရဲ့ဘေး ပန်ဆောင်ကျေးရွာ … Read more
Categories နိုင်ငံတကာသတင်း, ကြားသိရသမျှ
ဖိလဈပိုငျနိုငျငံရဲ့ အကွီးဆုံးမီဒီယာနဲ့ တှဆေုံ့ပွီး မွနျမာပွညျရဲ့ လကျရှိပွညျတှငျးရေးကို ဖှငျ့ခသြှားမယျဆိုတဲ့ SINON LORESCA
ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး Catwalk Model၊ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Sinon Loresca ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉) ခုနှစ်အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို အလည်လာရင်း မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် Sinon Loresca က မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်နှစ်ကျော်ကြာ နေထိုင်ကာ အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ ပရဟိတအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးမနေ့က ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၅) ရက်နေ့မှာ သူ့မိခင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် သူ့ရဲ့နိုင်ငံ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို ပြန်သွား ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိမှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Sinon Loresca က ဒီကနေ့မှာတော့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး သတင်းမီဒီယာနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးလက်ရှိမြန်မာ့ပြည်တွင်းရေးကို ဖွင့်ချပြောဆိုသွားမယ်ဆိုပြီး “ဒီနေ့ ကျွန်တော် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက အကြီးမားဆုံး သတင်းမီဒီယာတစ်ခုနဲ့ တွေ့ဆု့ဖို့ရှိပါတယ် မြန်မာအတွက် ကျွန်တော့် … Read more